Mvura isina mvura duffel bhegi Vagadziri & Suppliers - China Mvura isina mvura duffel bag Factory
New Grey Camouflage Yakakura-inotakura Mvura Isingapindi Bag
Hombe-yakakura isina mvura handbag, yakagadzirwa neTPU zvinhu, isingapinde mvura uye isingapfeki, isiri nyore kukuvadza.Pane zvirevo zvitatu zve20L, 40L, uye 60L kusangana nezvinodiwa zvako zvakasiyana zvekufamba.Bhegi risina mvura rakakodzera mamiriro akasiyana akadai sekukwira gomo, kufamba, kusimba, kudzidziswa, nezvimwe.
Nhamba yechinhu: LXD020
Muvara: Camouflage / Yakagadzirirwa ruvara
Kushandiswa: Kufamba kunze
Duffel bag isingapindi mvura inokodzera kufamba kunze.Iyo PVC isingapindi mvura inokodzera zviitiko zvakasiyana, sekushambira, kusimba, tenesi, kana rwendo rupfupi.Iri duffel bhegi richava mubatsiri wako akanaka.Bhegi remukwende iro ma fashionistas anoda zvemitambo kana kufamba anofanira kuva naro.Iine zvose zvakanaka uye inoshanda.
Kufamba Kwekunze Mvura Isingapindiki Duffel Bag
A multifunctional outdoor kufamba bhegi.Yepamusoro-mhando PVC zvinhu, hombe inokwana 65 litres.Inokodzera zvakasiyana-siyana zvezviitiko.Ungave uri kufamba kunze, kudzidzira munhandare yevolleyball, kushambira mudziva rekutuhwina, kana kudzidzira mujimu.Iri bhegi richava mubatsiri wako akanaka.
Yakakura-inokwana yekufambisa bhegi customization
Shamwari yako yekufamba, yakashongedzwa uye yakapusa, ingobvapo.Yepamusoro-yemhando yepamusoro isina mvura TPU zvinhu, isingapfeki uye isingapinde mvura.55L yakakura-yakakura yekuchengetera nzvimbo, ingave uri kufamba, kusimba, kana kudzidziswa kwakakodzera kwazvo.Zviri nyore kutakura uye nyore kushandisa.
Tsika Duffel Bhegi Kufamba Kwekusimba Kudzidzisa
Bhegi risina mvura reduffel rine 500D-PVC zvinhu uye 70L hombe.Unogona kuishandisa mukufamba, kusimba, kudzidziswa, kushambira uye zvimwe zviitiko.Kureruka kwayo uye kushorwa kwemvura kuchakuunzira kushamisika kukuru.